डेंगु देखिए एन्टिबायोटिक्स ‘नखानू’ बरू यसाे गर्नुहाेस …. - Hamro Abhiyan
डेंगु देखिए एन्टिबायोटिक्स ‘नखानू’ बरू यसाे गर्नुहाेस ….
काठमाडौं : डेंगु पोजेटिभ देखिएपछि काठमाडौं–१५ की सरिता तण्डुकारले घरनजिकै जँचाइन् । चिकित्सकले एन्टिबायोटिक्स औषधि खान सुझाए । उनले त्यसै गरिन् तर सञ्चो भएन ।उनी सोमबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगिन् । त्यहाँका चिकित्सकले एन्टिबायोटिक्स नखान सल्लाह दिए । तब पछुतो लागेको उनले सुनाइन् । एन्टिबायोटिक्स किन्दा उनको झन्डै ५ सय खर्च भएको थियो । कतिपय चिकित्सकले उक्त औषधि तीन दिनको लागि सिफारिस गरेको बिरामीले बताएका छन् । अस्पतालका प्रमुख कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बाँस्तोलाका अनुसार डेंगु भनेको भाइरल ज्वरो हो । ‘यस्तो अवस्थामा एन्टिबायोटिक्स खानुपर्दैन’, उनले भने, ‘ब्याक्टेरियाको सं*क्रमण भएपछि एन्टिबायोटिक्स सेवन गर्ने हो ।’ कतिपयले सं*क्रमण भएका बेला सागसब्जी खान नहुने सुनेको उल्लेख गरे । ‘कसले भन्यो यस्तो कुरा ? सागसब्जी प्रशस्त खाए हुन्छ’, उनले भने, ‘सिटामोल र झोल पदार्थ पनि खानुहोस् ।’
अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार डेंगु सं क्रमितले एन्टिबायोटिक्स सेवन गर्नुपर्दैन । ‘साधारण खालको क्लासिकल डेंगुका बिरामी देखिएका छन्’, उनले भने, ‘ज्यान लिने खालको छैन ।’ साधारण सं*क्रमितले घरमै आराम गर्दा लाभ हुने उनको भनाइ छ । ‘ज्वरो आए वा शरीर दुखेको छ भने सिटामोल खाए हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जीवनजल खाए हुन्छ । झोलिलो पदार्थ खाँदा फाइदा हुन्छ ।’ रगत पातलो गराउने औषधि सेवन गर्न नहुने उनले बताए । प्लेटलेट्स घटेको अवस्थामा चिकित्सकसँग परामर्श गर्न उनले सुझाव दिए । यो रोगको मुख्य लक्षण उच्च ज्वरो आउनु रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले बताए । यो ज्वरो पाँचदेखि सात दिनसम्म रहन्छ । टाउको असाध्यै दुख्छ । आँखाको गेडी र पछिल्लो भाग दुख्छ । ढाड, जोर्नी र मांसपेशी दुख्छ । शरीरमा बिमिरा देखापर्छ । धेरै ज्वरो आई दुई वा दुईभन्दा बढी लक्षण देखापरेको अवस्थामा डेंगु ज्वरो आएको शंका गर्न सकिने डा. लालले बताए ।
खुशीको खबर ! चीनमा रहेका कुनै नेपालीमा पनि को’रोना देखिएन
भक्तपुरमा एकाएक कसरी फैलियो को’रोना भा’इरस आ’तंक
सिन्धुपाल्चोक को’रोना भा’इरस लक्षण : बि’रामीको संख्या २०१ पुग्यो
स्कुल ड्रेसमै गर्भप’तन किशोरीहरु आउँदा मन भ’क्कानिन्छ, आ’त्तिएर झण्डै…
सिन्धुपाल्चोकमा एकैपटक सय जनाभन्दा बढीमा ‘करोनाको जस्तै बिरामी फेला ’, तुरुन्त सहयोग…